ONE CHAMPIONSHIP ရဲ့ အကြမ်းဆုံး Fighter နဲ့ UFC ပွဲအဆူဆုံး Fighter တို့ရဲ့ ပွဲဖြစ်လာနိုင်မလား ? - Grand Parents-Day
Home / News / Sport / ONE CHAMPIONSHIP ရဲ့ အကြမ်းဆုံး Fighter နဲ့ UFC ပွဲအဆူဆုံး Fighter တို့ရဲ့ ပွဲဖြစ်လာနိုင်မလား ?
ONE CHAMPIONSHIP ရဲ့ အကြမ်းဆုံး Fighter နဲ့ UFC ပွဲအဆူဆုံး Fighter တို့ရဲ့ ပွဲဖြစ်လာနိုင်မလား ?
by Admins on October 16, 2019 in News, Sport
One Championship ရဲ့ လိုက်ဟဲဗီးဝိတ်ချန်ပီယံခါးပတ်ကို အောင်လအန်ဆန်းက ဗီရာကို အနိုင်ယူပြီး ကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ် မိမိထက်ဝိတ်တန်းကြီးတဲ့ ဗီရာကို အနိုင်ထိုးနိုင်ခဲ့တဲ့ အောင်လအန်ဆန်းရဲ့ အနိုင်ပွဲဟာ ကမ္ဘာ့မီဒီယာတွေထက်မှာ တခမ်းတနားချီးကျူးဖော်ပြခံရတဲ့အထိ ဖြစ်ခဲ့တာပါဒီအောင်ပွဲဟာ လက်ရှိ One Championship ပြိုင်ပွဲမှာ အောင်လကို ပြိုင်ဘက်ကင်း ကစားသမားတစ်ဦးအဖြစ် ရောက်ရှိစေခဲ့တယ်လို့လည်း ဆိုရမှာပါ။
ဒါ့အပြင် One Championship ပြိုင်ပွဲဟာလည်း MMA ပြိုင်ပွဲတွေမှာ အဆင့်မြင့်ဆုံးလို့ဆိုရမယ့် UFC ပြိုင်ပွဲကို မမီသေးပေမဲ့ တဖြည်းဖြည်း ကမ္ဘာကျော်လာတဲ့ ပြိုင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်လာနေပါပြီ ဒီအခြေအနေမှာ One Championship အနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ ပြိုင်ပွဲကို ကမ္ဘာက ပိုမိုစိတ်ဝင်စားလာစေမဲ့ အခြေအနေတစ်ရပ်ကို ဖန်တီးနိုင်ဖို့ လိုအပ်နေပါတယ် အဲတာကတော့ အာရှပရိသတ်တွေကို အများဆုံး ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ One Championship ရဲ့ လက်ရှိအအောင်မြင်ဆုံး ဖိုက်တာဖြစ်တဲ့ အောင်လ နဲ့ UFC ပြိုင်ပွဲတွေမှာ နာမည်ကြီးတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ခါဘစ်တို့ နှစ်ဦးကို စင်ပေါ်တင်ပေးနိုင်ဖို့ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ သူတို့နှစ်ဦးကို ပွဲတည်ပေးဖို့အတွက် အခက်အခဲတစ်ခုတော့ရှိပါတယ် အဲတာကတော့ သူတို့ နှစ်ဦးရဲ့ မတူညီတဲ့ ဝိတ်တန်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် အောင်လက မစ်ဒယ်ဝိတ် ဖြစ်ပြီး ခါဘစ်ကတော့ လိုက်ဝိတ်တန်း ဖြစ်ပါတယ အောင်လက ၈၃ ကီလို ဖြစ်ပြီးတော့ ခါဘစ်က ၇၀ ကီလိုလောက်ပဲ ရှိတာပဲ ဒါပေမဲ့ ခုဗီရာနဲ့ ဝိတ်တန်းညှိပြီး ထိုးသွားသလို သူတို့နှစ်ယောက်ဟာလည်း ဝိတ်တန်းကို ၇၆ ကီလိုလောက်ထိ ညှိထိုးမယ်ဆိုရင်တော့ ဒီပွဲကဖြစ်လာနိုင်စရာ ရှိပါတယ် နောက်ပြီး ဖြစ်လာနိုင်စရာရှိတာက အောင်လရော ခါဘစ်ပါ MMA ဖိုက်တာတွေ ဖြစ်နေတာပါပဲ မတူညီတဲ့ နယ်ပယ်က ကစားသမားတွေတောင် UFC မှာ ထိုးနေကြတာဖြစ်ပြီးတော့ ခုလို နယ်ပယ်တူတဲ့ ၂ ယောက်ကို ကြိုးဝိုင်းထဲမှာ တွေ့ပေးဖို့ ဆိုတာ ပိုပြီး အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။
ဒီပွဲသာ ဖြစ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင် အရှေ့တိုင်းပရိသတ်တွေ အများဆုံး ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ One Championship နဲ့ အနောက်တိုင်းပရိသတ်တွေ အများဆုံးရှိတဲ့ UFC တို့အတွက် ဒီပွဲက ရမယ့် အကျိုးအမြတ်ကနည်းမှာ မဟုတ်သလို One Championship အနေနဲ့လည်း UFC ကို ဂုဏ်သိက္ခာပိုင်းအရ ယှဉ်ပြိုင်တဲ့ ပွဲ ဖြစ်လာမှာမို့လို့ အကျိုးရှိစေမဲ့ ပွဲတစ်ပွဲပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ခုချိန်မှာတော့ အောင်လနဲ့ ခါဘစ်တို့ ကြိုးဝိုင်းထဲမှာ ဆုံနိုင်မဆုံနိုင် မသိသေးပေမဲ့ One Championship မှာ ပြိုင်ဘက်ကင်းနေပြီလို့ ဆိုရမဲ့ အောင်လအတွက် One Championship အနေနဲ့ UFC ဖိုက်တာတွေနဲ့ ပွဲတစ်ခု စီစဉ်မလား မစီစဉ်ဘူးလားဆိုတာကတော့ ဘယ်သူမှ သေချာမပြောနိုင်သေးပါဘူး တကယ်လို့သာ စီစဉ်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် အောင်လအန်ဆန်းရဲ့ အောင်မြင်မှုတွေဟာ UFC ထိ ပိုမိုကျယ်ပြန့်လာနိုင်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ပရိသတ်ကြီးတို့ကရော ဘယ်လိုမြင်သလဲ ထင်မြင်ချက်လေးတွေ ရေးခဲ့ကြပါအုံးနော်။